डिजिटल कारोबारको सीमा हेरफेर
विपन पराजुली​/बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल कारोबारको सीमामा हेरफेर गरेकोे छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट नेपाली मुद्रामा भुक्तानी हुने गरी जारी गरिएका क्रेडिट कार्ड, प्रिपेड कार्ड र मोबाइल बैंकिङ तथा इन्टरनेट बैकिंङ्ग सेवा लगायत विभिन्न …
मोबाइल हराउने वा विभिन्न कारणले बिग्रिने समस्याले चिन्तित हुनुहुन्छ ? अब ढुक्क हनहोस, तपाईँको मोबाइलको रक्षामेरो सुरक्षाले गर्ने भएको छ । नेपालमै पहिलो पटक सञ्चालनमा आएको मोबाइल प्रोटेक्शन प्लानले मोबाइलका प्रयोगकर्ताको हैरानीको अन्त्य गर्ने भएको हो । मेरो सुरक्षा प्रालिले …
डिश मिडिया नेटवर्क लिमिटेड (DishHome)ले सिम्पल मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. (SIM TV) किन्ने भएको छ । दुवै कम्पनीको संचालक समितिको संयुक्त वैठकले 'सिम टि.भि.' डिश मिडिया नेटवर्क लिमिटेडले किन्ने गरि खरिद सम्झौता सम्पन्न गरेको छ । यस खरिद सम्झौता अन्तर्गतको सेयर खरिद …
रमेश लम्साल । तपाई सेयर कारोबार गर्नुहुन्छ ? काठमाडौँको धुलो र सवारी चापमा फसेर सेयरदलाल कम्पनीमा पुग्ने गर्नुभएको छ भने अब तपाईको दुःखको दिन सकिएको छ । तपाई अब घर, कार्यालय वा इन्टरनेट भएका जुनसुकै स्थानबाट पनि सहज रुपमा नै …
कुसुम लामा, कार्यकारी अध्यक्ष, प्रभु म्यानेजमेन्ट । अरु वित्तीय क्षेत्रमा भन्दा पनि सहकारी क्षेत्रमा टेक्नोलोजीको आवश्यकता एकदम धेरै छ । किनभने सबै स्थानीय तहहरुमा बैंकिङ सेवा पुग्दैछन् । माइक्रोफाइनान्सहरु पनि प्रायः जसो गाउँमा नै अवस्थित छन् । बैंकहरुले पनि आधुनिक …
ग्लोबल साइबर सेक्यूरिटी समिट साउन ११ देखि
इन्फर्मेशन सेक्यूरिटी रेस्पोन्ट टिम नेपाल(एनपीसर्ट)को आयोजनामा साउन ११ र १२ गते ग्लोबल साइबर सेक्यूरिटी समिट २०१८ हुने भएको छ । बिल्डिंग ग्लोबल एलाइन्स फर साइबर रिजिलेन्स नामक नाराका साथ काठमाडौँमा हुन लागेको समिटको पूर्वसंध्यामा नेपाल एकेडेमी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी(नास्ट)ले …
डिश मिडिया नेटवर्क लिमिटेडको संचालक समितिको अध्यक्षमा हेमराज ढकाल नियुक्त भएका छन् । कम्पनीको असार २१ गते शुक्रबार बसेको संचालक समितिको बैठकले देवी प्रकाश भट्टचनद्धारा अध्यक्ष तथा संचालक पदबाट दिइएको राजीनामा स्वीकृत गर्दै ढकाललाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो । भट्टचनको …
connectIPSमा आवद्ध भयो ओम डेभलपमेन्ट बैंक, अनलाइन पेमेन्टमा सजिलो
ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड पनि connectIPS e-payment प्रणालीमा आवद्ध भएको छ । यस सम्बनधमा नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेड र ओम डेभलपमेन्ट बैंकबीच सम्झौता भएको छ । उक्त प्रणालीको अनलाइनमार्फत दिइने भुक्तानी सेवा सम्बन्धि सम्झौतामा नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत …
‘मेरो सेयर’को नाममा अवैधानिक एप : प्रयोग नगर्नुहोस् है !!!
बैंकिङ खबर । केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीले विकास गरेको सेयर सम्बन्धि अनलाइन सफ्टवेयर मेरो सेयरको नामबाट मोबाइल एप निर्माण गरिएको छ । गुगल प्लेमा अहिलेसम्म यो एप १ हजारभन्दा बढी डाउनलोड भएको देखिन्छ । उक्त एप अवैधानिक भएको भन्दै सिडिएससी एण्ड क्लियरिङ …
कृषि विकास बैंकमा अब पूर्ण रुपमा इन्टरनेट बैकिङ्ग सेवा, यस्ता छन् सुविधाहरु
कृषि विकास बैंक लिमिटेडले पूर्ण रुपमा इन्टरनेट बैंकिङ्ग सेवा संचालन गरेको छ । यसका लागि बैंकले एफवान सफट इन्टरनेसनलसँग सम्झौता गरेको छ । सम्झौतामा कृषि विकास बैंकका तर्फबाट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लिला प्रकाश सिटौला र एफवान सफट इन्टरनेसनलको तर्फबाट …
हेर्नुहोस्, प्रविधिको नयाँ मोडेल : एउटै मेसिनबाट सम्पूर्ण बिल भुक्तानी
निर्जला खड्का/बैंकिङ खबर । बिल भुक्तानी गर्ने मेसिनलाई किओस्क (KIOSK) मेसिन भनिन्छ । यो मेसिनबाट विभिन्न किसिमका बिलहरु भुक्तानी गर्न सकिन्छ । यसले बिल बोकेर सम्बन्धित संस्थामा नै पुगेर पैसा बुझाउनुपर्ने झन्झटबाट ग्राहकहरुलाई मुक्त गरेको छ । एकै ठाउँबाट धेरै …
बैंकिङ कार्ड : प्रकार र प्रयोग
बैंकिङ खबर । बैंकहरुले खारसगरी तीन प्रकारका कार्ड जारी गर्छन् । डेविट, क्रेडिट र प्रिपेड । डेविट कार्ड : डेबिट कार्डलाई हामी एटिएम कार्ड भनेर पनि चिन्ने गर्दछौँ । एटिएम कार्डको प्रयोगबाट कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो बैंक खातामा रहेको रकम आफूले …
बैंकिङ खबर । एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेडले मोबाइल एप सेवा सुरु गरेको छ । लगानीकर्तालाई सवल, सूुचित तथा उपयुक्त निर्णय लिन विभिन्न माध्यमबाट क्षमता अभिवृद्धिको सेवाहरुका प्रदान गर्दै आएको कम्पनीले ग्राहकहरुको थप सुविधाका लागि मोबाइल एपको सुरुवा गरेको हो । …
रामप्रसाद गौतम । आजको विश्वमा सबैभन्दा धेरै मानिसले खोजेका चिजमध्ये पहिलोमा पैसा, दोस्रोमा मान सम्मान र तेस्रोमा ज्ञान हो । यो सङ्ख्यात्मक कुरा हो । यद्यपि मानिसले ज्ञान र सम्मान नै खोजेको होला । तर, यो सबैका लागि शुरूमा पैसा …